Clickfunnels Template Ahịa - Foneelu Of The Day
Ọ bụrụ na ị na-eche otú ike na ọ bụ na clickfunnels template n'ọma ahịa, gị na mkpa ime a web search na ị ga-ntabi-enweta ihe nnyocha nke otu template nhọrọ awa ọrụ n'ebe nile dabere na ha larịị nke ọma.
Ọ bụghị nanị na!
Ọtụtụ n'ime ndị a ndị nlebanye anya ga-aga mmezi nzọụkwụ iji jide n'aka na ị bulie kacha mma template maka azụmahịa gị dabeere na gị ngwaahịa àjà.
ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị a ndebiri abịa mbukota a ọtụtụ omenala atụmatụ, ị nwere ike mgbe niile ime ka ọ na-arụ ọrụ n'agbanyeghị na n'akuku nke gị oru.
Ị ga-enwe ike jikọọ ọrụ gị mmadụ netwọk ma ọ bụ na-enye CCS pop-esi menus, na-ekere òkè wijetị na ike ngosi nke ọdịnaya gị.